04 Nederland iyo boqortooyadeeda - Ku soo dhowow Nederland
Qarnigii 16-aad waxaa Nederland qabsaday Isbeyn. Nin la odhan jirey Willem van Orange, marmarna loogu yeedho Willem de Zwijger, ayaa hoggaamiyey dhaqdhaqaaq gobanimo doon, oo lagaga soo horjeeday Isbaanishkii. Tanoo keentay in Nederland xoriyadeedii qaadato 1648-dii. Muhiimada uu lahaa wakhtigan xaasaasiga ah daraadeed ayaa marmarka qaarkood loogu yeedhaa 'aabaha waddanka'.
Waxyaalo badan oo kale ayaa Nederland ninkan ku xusuusataa:
Halhayska(motto) Nederland waa 'je mainteindrai' taasoo af-Faransiis ah, oo loo macneeyo waan
adkaysanayaa. Halhayskan waxaa sameeyey Willem van Orange.
Heesta calanka ee Nederland 'het Willemmus' isaga ayaa lagu sharfaa.
Qoyska boqortooyada ee Nederland ninkan ayay kasoo farcameen. Waxaa kaloo qoyskan loogu yeedhaa 'Huis van Oranje', ama 'Qoyska reer Oranje'.
Qoyska boqortooyada ee Nederland aad baa loo jecel yahay. Qofka qoyskan ka tirsan ee loogu sii jecel yahayna waa Maxima, gabadhanoo asalkeedii reer Argantiin ah, waana xaaska ninka dhaxalka boqornimada leh, oo magaciisa la yidhaahdo Willem Alexander. Willem Alexander waa boqorka mustaqbalka ee Nederland, labadooduna waxay ilaa iyo hadda leeyihiin saddex gabdhood oo la kala yidhaahdo: Amalia, Alexia iyo Ariane.
Boqoraddu dawladda ayay wasiirada kula jirtaa. Sharci ahaana iyada ayaa dawladda ugu saraysa, laakiinse shaqo ahaan awood badan ma leh; Maalinta boqoradda oo ah talaadada saddexaad ee september, qudbad ayay jeedisaa, qudbadaasoo noqota go'aamada ay dawladdu qaadan doonto sannadkaa cusub.
30-ka april Nederland waa laga dabaal-degaa. Dadka shaqooyinkooda waa laga fasaxaa, meel kastana calamaa sudhan. Calamadan waxaa ku sawiran calaamada Oranje, taasoo ah calaamadda reer boqor(Oranje-Nassau). Maalintan waxaa loo dabaal-degaa dhalashadii boqoradda. Run ahaantii boqoradda
Beatrix waxay dhalatay 31-ka janaayo, laakiinse maalinta Nederland aad bay u qabowdahay, oo in la dabaal-degaa way adag tahay, sidaa daraadeed ayaa 30-ka april loo dabaal-degaa. Maalintani waa dhalashadii boqoradii tan ka horaysay, oo magaceeda Juliana la odhan jirey. Boqoradda Beatrix maalintan waxay caado u leedahay inay laba meelood booqasho ku tagto, meelahanoo dabcan si dheeraad ah looga dabaal-dego.
Boqoraddu waxay isticmaashaa saddex qasri. Magaalada Den Haag waxaa ku yaal labada qasri ee la kala yidhaahdo Paleis Noordeinde iyo Pleis Huis den Bosch. Amsterdam waxaa ku yaal 'Pleis op de Dam'. Qasriyadan waxaa iska leh boqortooyada Nederland. Willem Alexander iyo Maxima waxay ku nool yihiin 'Eikenhorst' oo ku taal magaalada Wasenaar. Haddii aad ka heshid qasriyadan waad booqan kartaa. Waxaa kaloo suurto-gal ah inaad ka daawatid internet-ka.